Indlela Khetha iitawuli
Ukuthenga iitawuli yinkqubo touchy. Ngokuqinisekileyo, ufuna ukuthenga iitawuli ezixhamla ezithambileyo kunye ngobunewunewu, kodwa yintoni 'gram count' ngokwenene ukuthini? Kwaye Umxelela njani umahluko phakathi yomqhaphu Turkish nomqhaphu yaseYiputa okanye bakhethe nomnyama imibala kunye neepatheni? Phambi kokuba ibhola ngetawuli ngokukhawuleza kakhulu, thatha ixesha lokufunda isikhokelo sethu sesandla ngezantsi. Siye ndawonye kwaye amaqela yonke into ofuna ukuyazi malunga ukukhetha indlela iitawuli ngokweendidi ezintlanu ezingundoqo, ukususela ubukhulu kunye nobunzima kulawkhiwo, ukuze uphendlo lwakho ziya kuhamba kakuhle kangangoko kunokwenzeka.
Iitawuli kuza ezahlukeneyo zobungakanani ukuba kufuna ukuba siqwalasele phambi ukuthenga kwakho. A itawuli bath eqhelekileyo ukuba yaphuse off emva ishawa okanye ibhafu ngu 27 "x 52", lo gama noxwebhu bath inkulu kancinane kwi-35 "x 60". A Iphepha bath inikeza more, elikuvumela ukuba azisongele ngokupheleleyo ngokwakho. Ukuba ukuzingelwa iinketho ezincinane, iitawuli isandla 16 "x 30", lo gama washcloths square 13 "x 13".
Bati itawuli mninzi ulinganiswa grams imitha square (GSM) nganye, kwaye eli nani uyahluka 300-900. A ithawula 300-400 gram ukubhitya ngokukhanya, eyenza kube kokufanelekileyo ukuba ejimini okanye ekhitshini. Ezi yome ukukhwelwa ngaphezu iitawuli nzima. A 400-600 GSM i itawuli ubunzima medium ukuba mkhulu elunxwemeni, kwaye zingasetyenziswa iitawuli ebhafini ngemihla. Kwaye ekugqibeleni, GSM 600-900 esixineneyo izifunxi, nto leyo eyenza ukuba uzive extra obutofotofo kodwa ufuna elininzana Ixesha yokomisa. Nge iitawuli zethu, sithanda ukuba ayixabele ukulingana ogqibeleleyo obukhulu ezintofontofo kunye izifunxi, kodwa ukukhanya ngokwaneleyo ukuba sikhawuleze-yokomisa.
Khetha Cotton wakho
ahluphekayo ngemihla badla ezenziwe bomqhaphu eqhelekileyo. umqhaphu Turkish, kwelinye icala, imicu elide ukuba banike iitawuli okuphuma extra kunye ukuva othambileyo. Iitawuli ezenziwe yomqhaphu Turkish abe elide kweziporo, zamahlathi ngakumbi ngemisonto ukuba ufunxe eninzi ukufuma kunye emgibeni ifudumale. Popular in iihotele kunye Spa, kuba inzima ngaphezu sanitary standard yaye ithathe ixesha elide ukuba zome. Khetha umqhaphu Turkish xa ukhetha noboya, angase obutofotofo. Kwakhona baba lithambile yaye fluffier kunye nayiphi indawo yokuhlamba. Enye indlela izifunxi kakhulu kwaye ixesha elide? Iitawuli ezenziwe Zero twist technology. Le nto uziva linyuke ezithambileyo kunye anoboya ngelixa likwabonelela ixesha yokomisa elifutshane. Zero iitawuli twist cotton ezi elula, somelele kwaye lula packable.
Khetha banikele okanye Ringspun Construction
Iitawuli ezenziwe yomqhaphu echazwayo kuthetha ukuba kwimicu zabo echazwayo ukususa imisonto elifutshane kunye nobutyobo, beshiya imisonto linamandla yaye inde ukuba zayinxalenye ngetawuli webhate. Le nkqubo iqinisekisa iyahlala luthintele pilling. Ringspun cotton wenziwa kwimicu emide ezimfutshane nesijijekileyo ukwenza Ubuthelezi, vulu okuhle ngexesha kwilinen terry kwenziwa neemigaqo ezinkulu womsonto ephothiweyo waseUzali eyongezelelweyo. Kwakhona, khangela ukuba iitawuli ezenziwe elintlangothi ibhendi ukunciphisa fraying.
Khetha umbala and Style
Iitawuli ungongeza efudumeleyo, kokugqiba touch ukuya lokuhlambela, ngoko cinga ukukhetha abemaninzi ngombala fun aksenti okanye ipateni. Enye indlela Stock nekhabhathi zakho imibala ezisekelwe ixesha (oko kukuthi, imibala beachy eqaqambileyo entwasahlobo / ehlotyeni, imibala kuyabanda ukuwa / ebusika). Ukukhetha kakhulu Classic yi iitawuli emhlophe anoboya, ekhangeleka lixesha kwaye sisebenze nayiphi isimbo okanye sentlalo.
Eyona ndlela ilungileyo yokwenza ukuba iitawuli zakho zihlala ixesha elide kukukhathalela efanelekileyo kubo. Ngaphambi kokuba usebenzise iitawuli yakho, uhlambe kanye ukuba ukunceda ukucwangcisa umbala wabo, ukuphucula absorbency nokunciphisa nayiphi iintshengece. Kwakhona, kuphephe ukusebenzisa softeners ngelaphu ukusukela ukuba ushiye intsalela kunye nokudala texture lukhuni. Ngokubeka ixesha elincinane kunye namandla ibe zenkqubo yokhetho, uya kufumana iitawuli ukuba bongeze zombini isimbo kunye nentuthuzelo ukuya yangasese yakho.